Apple ကဖုန်းတစ်လုံးကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ တခြားတစ်ယောက်ယောက်ကဟိန်းနေတာလား။ | Martech Zone
Apple ကတယ်လီဖုန်းတစ်ခုထုတ်သည်။ တခြားတစ်ယောက်ယောက်ကဟိန်းနေတာလား။
အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 9, 2007 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 20, 2018 Douglas Karr
ငါမကြိုက်တာကငါမကြာသေးခင်ကငါအလုပ်မှာ MacBook Pro ကိုပြောင်းသွားတာကိုသင်သိလိမ့်မယ်။ ငါပျော်တယ်၊ သဘောကျတယ် OSX ကအရမ်းကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့မှာအက်ပလီကေးရှင်းတွေပြတ်တောက်နေဆဲ၊ ငါမှာပြwithနာရှိနေသေးတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အိမ်သည် Mac အားလုံးမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တွင် G4 တစ်ခုရှိပြီးကျန်ကွန်ပျူတာများမှာ XP လည်ပတ်သောကွန်ပျူတာများဖြစ်သည့် Buffalo Linkstation နှင့်အတူ Linux ဖြစ်သည်။
ငါဟာဖုန်းတစ်လုံးတီထွင်ခဲ့တာကိုတကယ်သဘောမကျတဲ့ကမ္ဘာမှာတစ်ယောက်တည်းလား။ ဒါဟာလူတွေအတွက်တယ်လီဖုန်းပဲ။ 'တော်လှန်ရေးသမား' ကဲ့သို့သောဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ တော်လှန်ရေးလား? တကယ်လား ငါဘာပျောက်နေတာလဲ ဒါကဖုန်း 2.0 မဟုတ်လား။
standard keypad အစား iPhone သည် multi-touch ဟုခေါ်သောမူပိုင်ခွင့်ရှိသော Apple နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်တံတိုင်းမသုံးပါ၊ “ လက်ချောင်းစုံအမူအရာများ” ရှိပြီးမရည်ရွယ်ထားသည့်ထိတွေ့မှုကိုလျစ်လျူရှုထားသည်ဟုဆိုထားသည်။ ဂျော့ဘ်က၎င်းကိုအခြားတော်လှန်ပြောင်းလဲသော Apple UIs နှစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည် - Macintosh ပေါ်ရှိမောက်စ်နှင့် iPod ရှိကလစ်နှိပ်ပါ။
အေးအေးဆေးဆေးသူတို့တစ်တွေ touch pad တိုးတက်လာသည်။
virtual keyboard နှင့်အတူ 3.5 လက်မ touchscreen ကို။
wow, ပိုကြီးတဲ့မျက်နှာပြင်။ ငါ့ဖုန်းမှာ 'virtual keyboard' ရှိတယ်။
iPhone သည်အက်ပဲလ်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြစ်သော OS X ကိုလည်ပတ်သည်။ Engadget ၏ထိပ်တန်းလွှမ်းခြုံမှုအရ "ဒါဟာဖုန်းအများစုမှာသင်ရှာတွေ့တဲ့မသန်မစွမ်းဖြစ်ရပ်တွေမဟုတ်ဘဲ desktop class applications တွေနှင့် networking တွေကိုဖန်တီးခွင့်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒါတွေကတကယ့် desktop applications တွေပဲ" လို့ပြောပါတယ်။
ငါ Illustrator ကို ၃.၅ လက်မဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ run နိုင်သလား။ ဟုတ်တယ် 3.5Gb RAM နဲ့ပါလား။
iTunes နှင့်စည်းညှိခြင်း -“ iTunes သည်သင်၏မီဒီယာအားလုံးကိုသင့် iPhone နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်သော်လည်း data တစ်တန်လည်းရှိသည်။ အဆက်အသွယ်များ၊ ပြက္ခဒိန်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ မှတ်စုများ၊ မှတ်သားထားမှုများ၊ အီးမေးလ်အကောင့်များ…”
Apple ၏ဒီဇိုင်းပိုင်းခွဲများသည် iPhone အားလုံးတွင်ရှိသည် -“ ၃.၅ လက်မဖန်သားပြင်၊ ကျွန်တော်တို့တင်ပို့ခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံး resolution screen 3.5ppi ။ မည်သည့်စမတ်ဖုန်းများထက်မဆိုခလုတ်တစ်ခုတည်း၊ “ အိမ်” ခလုတ် […] ပါးလွှာသည်…”
ပိုကောင်းတယ်၊ ပိုမြန်တယ်၊ အားကောင်းတယ်၊ ဒါကဒေါ်လာ ၆ ဘီလီယံဖုန်းဖြစ်တယ်။
2 megapixel ကင်မရာပါဝင်သည်
ဟုတ်တယ်၊ ရတယ် ပြီးတော့ကျွန်တော့်ဖုန်းကဗွီဒီယိုနဲ့အသံကိုလည်းလုပ်တယ်။
ထူးခြားသောမီဒီယာအင်္ဂါရပ်များ - သင်၏တေးဂီတ၊ မျက်နှာပြင်ကျယ်ဗီဒီယို၊ အယ်လ်ဘမ်အနုပညာ၊
အဖြစ်ကောင်းစွာကြောင်းအချို့ရတယ်။ ၃.၅ w မျက်နှာပြင်ကျယ်သည်? အဘယ်သူနည်း၊
သင့် iPhone ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာ (သို့) မက်ဖြင့်စည်းညှိပါ (အဆက်အသွယ်များစသဖြင့်)
ပုံမှန်ဖုန်း၏အင်္ဂါရပ်များ - SMS၊ ပြက္ခဒိန်၊ ဓါတ်ပုံများနှင့်စသည်တို့။ ဓာတ်ပုံများဖြင့်ဖုန်းကိုသင်လှည့်သောအခါရွေ့လျားသည့်အာရုံခံကိရိယာရှိသည်။
ငါကီးဘုတ်ကိုချလိုက်တဲ့အခါငါ့မျက်နှာပြင်လှည့်။ အိုကေ ... မင်းငါ့ကိုရတယ် ... ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာတွေကချိုတယ်။
ချိုမြိန်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးရှိကျွန်ုပ်၏အသံစာကိုစစ်ဆေးသောအခါကျွန်ုပ်သည်လိုအပ်သောစာများကိုစာတိုပို့ခြင်းဖြင့်သာရေးသားနိုင်သည်။ ငါပြောက်သို့ပြေးသကဲ့သို့ငါလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းဖြင့် scroll နိုင်ပါတယ်!
Rich HTML အီးမေးလ်များ - မည်သည့် IMAP သို့မဟုတ် POP3 အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုအလုပ်လုပ်သည်။ ဤသည် BlackBerry များအတွက်ဒုက္ခ spells!
Safari browser သည် iPhone ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည် -“ ၎င်းသည်ဆဲလ်ဖုန်းတွင်ပထမဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့်အပြည့်အဝ browser ဖြစ်သည်။ ” ဂျော့ဘ်ကအိုင်ဖုန်းတွင် NYT အလုပ်လုပ်နေသည်ကိုပြသသည်။ အမှန်တကယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မဟုတ်ဘဲ WAP ဗားရှင်းမဟုတ်ပါ။
Shenannigans! ငါ Opera Mobile ကိုသုံးနေပြီး၎င်းသည် 'အပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်သည်' ။
ဘရောင်ဇာနဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု…အတူတူငါလုပ်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အပိုလက်မဖန်သားပြင်ကကျွန်တော့်ရဲ့လမ်းကိုပိုမိုလွယ်ကူအောင်ကူညီလိမ့်မယ်။
အင်တာနက်ကိုအဆင်မပြေစွာဆက်သွယ်နိုင်သည့်ဝစ်ဂျက်များ (WiFi နှင့် EDGE မှတဆင့်)
Yahoo မှ“ push” IMAP အီးမေးလ်ကိုအခမဲ့
ငါကဒီအကြောင်းတိတ်တဆိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကတော့အဲဒါကိုမရဘူး ကြိုက်တယ် အများကြီး ဖုန်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုအတွက်ဖောင်းပွတာမဟုတ်လား။
Broadband ဗွီဒီယိုကိုဗီဒီယိုဆက်သွယ်မှုကိုဒီလူဆိုးလေးကိုလွှင့်ပစ်ပါ။ ဒီ Star Trek geek ကမျက်နှာကျက်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါမရှိရင်ဒါကဖုန်းပဲ။
ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲ Apple ကတီဗွီကိုလွှင့်တယ်။ Umm …။
PS: ဘီလ်အားအထူးတောင်းပန်ခဲ့သည်။ သူသည်သူကိုယ်တိုင်အနားတွင်ယနေ့နေ့လယ်စာစားနေစဉ်တွင်သူ ၀ ယ်ယူရန်မည်မျှစွန့်လွှတ်ရမည်ကိုတွက်ချက်ပြီးဖြစ်သည်။ ငါမင်းကိုဘီလ်ကိုစော်ကားဖို့မရည်ရွယ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဒါကဖုန်းတစ်လုံးအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေတာကောင်းတယ်။
Tags: ပန်းသီးApple iPhoneiphone
ဇန်နဝါရီ 10, 2007 မှာ 12: 40 AM
ငါနေဆဲတော်လှန်ရေးသမားနှင့်စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ် ပန်းသီး 🙂🙂
ဇန်နဝါရီ 10, 2007 မှာ 3: 01 AM
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည် iPod ဗီဒီယိုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်ဒေါ်လာ ၄၀၀ သုံးစွဲခဲ့ပြီး iPhone ကို ၀ ယ်ရန်မရှာတော့ပါ။ အချို့လူများက iPhone ကိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်“ trades master of none” ဖြစ်မည့်ပစ္စည်းထက်ဖုန်းနှင့် MP400 player အတွက်သီးခြားပစ္စည်းများကိုပိုနှစ်သက်သည်။
ဇန်နဝါရီ 10, 2007 မှာ 6: 38 AM
iPhone ထင်သာမြင်သာအောင်လုပ်တဲ့အရာကသူ့ရဲ့ရိုးရှင်းမှုပဲ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားခြင်းမရှိသောဖုန်းပိုင်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီ။ သင်တို့မူကားဤမျှလောက်များစွာသောခလုတ်ကိုတွန်းအားပေးရန်ရှိသည် (နှင့်ရှိပါတယ် များသော သူတို့ထဲက) ကပဲငါ့ကိုပယ်ထားတယ်။ တစ်ချိန်လုံးပျက်သွားသည် ရိုးရှင်းသောထပ်တူပြုခြင်းမရှိပါ (ဟေး၊ ယနေ့ငါ OSX နှင့်ထပ်တူပြုနိုင်မည်မဟုတ်) ။ အမှားအယွင်း။
ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့၊ တစ်ခုချင်းစီရဲ့အင်္ဂါရပ်တစ်ခုတည်းကသူ့ဟာသူထူးထူးခြားခြားဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကအက်ပဲနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့ PDA ဖုန်းရှိကောင်းရှိမယ်။
OSX ပေါ်မှာ crash ဖြစ်နေတာကိုငါအံ့သြသွားတယ်။ ငါသည်ငါ့ macs အပေါ်အလွန်တောင်းဆိုမှုများကိုဗီဒီယိုအလုပ်အကိုင်များကို run နှင့်အလွန်ရှားပါးသော crash ရ။ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မှသာကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်စတင်ခြင်းမလိုအပ်ပါ။ Third party plug-in တွေအများကြီးသုံးသလား။
မက္ကစီကို - ကျွန်ုပ်သည် Macs ၅ ခု၏အလွန်ပျော်ရွှင်သောပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်
ဇန်နဝါရီ 10, 2007 မှာ 8: 32 AM
ကျွန်တော့်ကို Apple မကျေနပ်တဲ့ Apple ဖောက်သည်လို့မထင်စေချင်ပါဘူး။ MacBook Pro ကိုတော့လုံးဝသဘောကျပါတယ်။ ဝမ်းနည်းစရာကဒါကိုကျွန်မဘယ်တော့မှမစွန့်ခွာဘူး။ simpl“ ရိုးရှင်းခြင်း” အပေါ်သင်၏အမှတ်ဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံခဲ့သမျှအားလုံးဖြစ်သည်။ ငါဖုန်းကိုပေါ်ရှိအားလုံးဖောင်းပွမှာအရမ်းထိတ်လန့်!
ငါရှင်းလင်းသင့်တယ်…ငါ OSX ကိုဘယ်တော့မှမပျက်ဆီးခဲ့ဘူး၊ အချို့သောပရိုဂရမ်များသာလည်ပတ်နေသည်။
ကျွန်ုပ်၏မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက် - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်လျှင် Mac ၅ လုံးပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်။ 😉
ဇန်နဝါရီ 10, 2007 မှာ 8: 49 AM
စစ်မှန်တဲ့ Mac N00b လိုစကားပြောခဲ့ အဲဒီမှာ Doug ဆွဲပါ။ သင်ရလိမ့်မယ်
သင်တစ်ခုခု ၀ ယ်သောအခါငါ့ကိုအမြဲပြောမည့်သူမဟုတ်ပေ။ “ အင်း .... ဒါပေမယ့် cooool ပါပဲ။ "
သင် Super-duper ကဆိုသည်
ဇန်နဝါရီ 10, 2007 မှာ 9: 17 AM
🙂ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ Applefans တွေကအမြဲတမ်းကာကွယ်ရေးအတွက်
Apple ကသူတို့ဖောင်းပွမှုအတွက်အလွန်ကောင်းသောဖြစ်ကြသည်။ Keynote ကိုကြည့်သောအခါ“ Buy Now” ခလုတ်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်ုပ်သွေးဆောင်သည်။ ကံကောင်းတာကတော့ဒီထုတ်ကုန်တွေဟာနောက်ပိုင်းမှာဥရောပထက် (နောက်ပိုင်းမှာနော်ဝေနိုင်ငံကိုပါ) အမေရိကန်ကိုရောက်လာတာဖြစ်လို့သာမန်အသုံးပြုသူတွေဆီကတကယ့်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်အမြဲဖတ်နိုင်ပြီ။
AppleTalk မှ“ တော်လှန်ရေး” သည်“ သူအလုပ်လုပ်သည်” ကိုဆိုလိုသည်။ ဝမ်းနည်းစရာမှာစက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းမဟုတ်ပါ။
10:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 7, 44
ငါထပ်ပြောပါ ဦး၊ ငါဘလော့ဂါတစ်ယောက်ကိုမပြောင်းလဲတော့ဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်😉
iPhone အတွက်အဓိကတင်ဆက်မှုကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသည်နှင့်၎င်းသည် ၀ က်ဘ်ရှာဖွေခြင်းကို (ယခုဖုန်းအများစုနည်းတူ) သာမကဘဲသာမာန်အားဖြင့်ပါ ၀ င်စေနိုင်ပုံရသည်။ ၎င်းသည်အင်္ဂါရပ်အများစုအတွက်တူညီသည်။
နောက်မှငါ့ကိုထိမိခဲ့တာကတော့ဟေး၊ ဒီဟာ OSX သုံးပြီး Desktop ပါဝါရှိလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်တင်ဆက်မှုမှာပြသဖို့ app တစ်ခုမှမရှိဘူး။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင်: ရေကြောင်းပို့ဆောင်ခြင်းမတိုင်မီလသည်ဖောင်းပွမှုအသစ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ 😉 Apple သည်ဤအချက်ကိုသဘောကျသည်။
iPod ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ geeks တော်တော်များများကအဲဒီအကြောင်းကိုဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်။ ငါကောင်းပြီ၊ ဒါကခရီးဆောင် harddisk၊ ဒါဘာလဲလို့ပြောနေတာငါမှတ်မိသေးတယ်။ ဒီနေ့သူတို့စျေးကွက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။
တယ်လီဖုန်းဈေးကွက်တွင်သူတို့နောက်ကျသွားပြီဖြစ်သော်လည်း usabilty အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သူတို့သည် US ၌အလွန်ကောင်းသောဖြန့်ဖြူးသောကွန်ယက်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စျေးကွက်ဝေစု ၁% သည်လက်လှမ်းမမီနိုင်ပါ။
တဖန်သင်တို့သတိပြုမိကြပေလိမ့်မည် Yvonne ပြန်အသက်ရှင်သောသူတို့အကြားဖြစ်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ 11, 2007 မှာ 10: 46 AM
ငါအပြုသဘော comatose ဖြစ်၏
စက်တင်ဘာ 2, 2008 မှာ 8: 08 AM
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ ဒီ post ကို rev ပြန်လည်ပြင်ဆင်မည် would?
စက်တင်ဘာ 2, 2008 မှာ 8: 49 AM
Foo မသေချာဘူး စျေးကွက်ဝေစုနှင့်လူကြိုက်များမှုမှာအက်ပဲလ်၏ယဉ်ကျေးမှုကြောင့်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်သည်အဆင့်လိုက်၊ ပိုမိုထိရောက်သောတုန့်ပြန်မှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်မျက်နှာပြင်တစ်ခု၊ အက်ပလီကေးရှင်း (မူရင်းမဟုတ်) ပါ။ ငါထင်တာကတော့သူတို့တွေဟာဘားကိုသေချာပေါက်မြှင့်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့်ငါက "အေး" တဲ့အချက်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအများကြီးမမြင်နိုင်သေးဘူး။
မကောင်းသောအနေဖြင့် iPhone သည်ထိတွေ့နိုင်သောအသုံးဝင်မှုရှိစေရန် (နိမ့်ကျသောလက်နှစ်ချောင်းဖြင့်အသုံးပြုရန်သင်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်) နှင့်ကြို့ထိုးခြင်းများစွာရှိသည် - kill switch, disabled tethering (အင်တာနက်ကို သုံး၍ အင်တာနက်) 3g အောက်တွင်အရည်အသွေးနိမ့်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများ။
ပိုက်လိုင်းကိုဆင်းလိုက်တာကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ iPhone ကသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့ဂိမ်း consoles တွေနဲ့ခေါင်းကိုက်နေတယ်။ ဒါကစျေးကွက်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
Android ကတော့ Mobile OS ပါ။ မည်သည့် hardware နှင့်မဆိုအကန့်အသတ်မရှိလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ပွင့်လင်းသောဖုန်းနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာသော application store သည် iPhone ထက် ကျော်လွန်၍ ကြီးမားသောခုန်ကျော်မှုဖြစ်နိုင်သည်။